मैले स्थापित हुने संकल्प गरेकी छु : गायिका तृप्ति खड्का । – Namaste Filmy
मैले स्थापित हुने संकल्प गरेकी छु : गायिका तृप्ति खड्का ।
नेपाली संगीत बजार त्यनि बिस्तारै फैलिदै गइरहेको छ । यहि फैलिदो बजारमा आफुलाई चिनाउनको लागी धेरै नवप्रवेशी गायक तथा गायिकाहरुले मिहेनत गरिरहेका छन । त्यहि मिहेनत गर्नेहरुमध्य एक हुन तृप्ति खडका । उनी हालसम्म दुइवटा एल्बम निकालिसकेका छन । अफना गीतहरुमार्फत विस्तारै स्रोताहरुको मनमा बस्दै गइरहेकी यि गायिकासंग नमस्तेफिल्मीको लागी राजेन्द्र कार्कीले गरेका कुराकानी :
प्रश्न ःतपाई कस्तो प्रकारको गीत आउन मन पराउँनु हुन्छ ?
उत्तर ः म आधुनिक, लोक, पप सबै प्रकारका गीतहरु गाउने इच्छा र क्षमता दुबै राख्छु ।
प्रश्न ः अहिले सम्म कतिवटा एलबम निकाल्नु भयो त ?
उत्तर ः दुइवटा निकालीसकेको छु । पहिलो पनि तृप्ति नै नाम दिएको थिए, अहिले पनि तृप्ति नै रहेको छ । दुबै भिसिडी हुन ।
प्रश्न ः दोस्रो “तृप्ति” एलबम बाट दर्शक तथा स्रोताहरुले कस्ता गीतहरुबाट मनोरञ्जन लिन सक्ने छन ?
उत्तर ः यो एलबमबाट दर्शक तथा स्रोताहरुले लोक र आधुनिक गीतहरुको संयोजनको मिठास पाउनु हुनेछ । मलाई विश्वास छ, यस दोस्रो एलबमबाट पनि दर्शक तथा स्रोताहरुले भरपुर मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।
प्रश्न ः महिला गायिका भएर यो क्षेत्रमा स्थापित हुन कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ त ?
उत्तर ः यो क्षेत्रमा स्थापित हुन कत्तिको गाह्रो रहेछ भन्ने त कुरै नगरौं । तर ममा पुर्ण विश्वास छ की जो सँग खुबी र क्षमता छ उ निरन्तर लागिपरिरहे अवश्य पनि स्थापित हुन सकिन्छ । मैले पनि त्यहि संकल्प गरेको छु ।
प्रश्न ः यस क्षेत्रमा तपाइले भोग्नु परेको खास पिंडा चाहि के हो नी ?
उत्तर ः म त छक्क परेको छु यस क्षेत्रका अगुवाहरु देखेर । उनीहरु खुबी, क्षमता र प्रतिभालाई भन्दा पनि अन्य अन्य कुराहरुलाई बढी प्राथमिकता दिँदा रहेछन् । मलाई के लाग्यो भने यहि कारणहरुले गर्दा नै यहाँ धेरै राम्रा राम्रा प्रतिभाहरु फक्रिन नपाई कोपिलामा नै औलिइ झर्नु परिरहेको छ । मैले पनी त्यस्तै अनुभव बटुलेको छु ।
डेढ महिनामा सकियो नम्रता र लाउरेको 'ताण्डव' ।